सर्वसम्मत अध्यक्ष बन्ने प्रचण्ड रणनीति
काठमाडौं, असार २५ : नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पार्टीभित्र सबल अवस्थामा छन्। पार्टीभित्रका तीन गुटमध्ये सबैभन्दा ठूलो गुट उनैको हो। झण्डै ४० प्रतिशत हिस्सा उनैसँग छ।
जबकी पार्टी र राजकीय सत्ता दुवैको एकल नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग करिब एकतिहाइ मात्र छ। प्रचण्डले माधवकुमार नेपाल वा ओली, जुन समूहलाई साथ लिए पनि उनीसँग दुईतिहाई बहुमत पुग्छ। पार्टी कमिटीमा मात्र हैन, संसदीय दलमा समेत उनी निर्णायक हैसियतमा छन्। अनि पार्टीमा अध्यक्ष पदसहित दोस्रो मर्यादाक्रम त छँदैछ।
अहिले नेकपा वृत्तमा अर्को चर्चा पनि व्याप्त छ– प्रचण्ड र माधव नेपाल गुट मिले भनेर। प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजकीय सत्ता मात्र हैन, पार्टीसत्तासमेत एकलौटी रजाइँ गर्न थालेपछि ‘समान हैसियतका अध्यक्ष’ प्रचण्ड र चार वर्षदेखि लगातार पेलाइ खाँदै आएका माधव नेपाल पक्षबीच कतिपय सवालमा ‘कार्यगत एकता’ पनि हुने नै भयो।
के अब अध्यक्ष प्रचण्ड वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षसँग मिलेर प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध गुटबन्दीमै लागेका हुन् त? बहुमतको बल देखाएर नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी ‘भद्र सहमति’ बनाएर प्रचण्डले पार्टी अध्यक्षका हैसियतमा बहुमतको बल देखाउलान् त? वा, छिट्टै महाधिवेशन गराएर ओली पक्षलाई किनारा लगाउने खेलमा लाग्लान्? नेकपाको भावी राजनीतिबारे यस्ता ‘व्यर्थ अनुमान’ले घर गर्न थालेका छन्।
प्रचण्डनिकट स्रोत भन्छ– प्रचण्ड यस्ता खेल खेल्ने कच्चा खेलाडी हैनन्। आफू निकटस्थलाई यस्तो गर्दा पार्टी एकताको अर्थ हुँदैन भन्दै आएका छन्, उनले। पूर्वएमालेकै गुटगत राजनीतिमा मिसिएर गुटको नेता बन्नु उनको लक्ष्य हैन।